प्रधानन्यायाधीश राणाकी गृहणी श्रीमतीले डेढ वर्षअघि किनेको त्याे २४ करोडको जग्गा …..
January 6, 2022 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीश राणाकी गृहणी श्रीमतीले डेढ वर्षअघि किनेको त्याे २४ करोडको जग्गा …..
काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नी पत्नीका नाममा डेढ वर्षअघि काठमाडौंको भाटभटेनीमा महँगो जग्गा किनेको भेटिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-५, भाटभटेनीस्थित ७ नम्बर कित्ताको डेढ रोपनी जग्गा प्रधानन्यायाधीश पत्नी रेजी राणाका नाममा किनेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। उक्त २४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर उनले ८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा किनेको मालपोतको रेकर्डमा छ। यो सम्पत्ति […]
सहरमा लाइन बस्न थपियो एउटा अर्को कारण
January 6, 2022 January 6, 2022 N88LeaveaComment on सहरमा लाइन बस्न थपियो एउटा अर्को कारण
काठमाडाैं । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-४ का २४ वर्षीय प्रदीप शिवभक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको चार दिन भयो। उनी शंखरापुरमै डेरी अपरेटरको काम गर्छन्। काठमाडौं प्रशासन कार्यालय धाउनकै लागि उनी चार दिनदेखि अफिस गएका छैनन्। बुधबार त उनको जन्मदिन पनि रहेछ। तर उनी बिहानैदेखि लाइनमा थिए। प्रदीप रोमानिया जाने योजनामा छन्। त्यसका लागि अहिले इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) […]
लाखौँमा एक हुने गर्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, सानैमा बन्छन् करोडौँका मालिक
January 6, 2022 N88LeaveaComment on लाखौँमा एक हुने गर्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, सानैमा बन्छन् करोडौँका मालिक
काठमाडौँ । मानिसको चरित्र उनीहरुको राशि अनुसार पनि थाहा पाउन सकिन्छ। किनकी व्यक्तिको चरित्र उसको राशिमा निर्भर हुने गर्छ। आज हामी तपाईलाई यसै सन्दर्भमा केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जुन राशिका व्यक्तिलाई महाशक्ति पनि भनिने गरिन्छ। यी राशिका मानिस आफ्नै श्रमका भरमा निकै कम उमेरमा गाडी, घर, धनसम्पत्ति खडा गर्ने गर्छन्। धेरै मेहनत गर्ने […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २३ गते शुक्रबारकाे राशिफल
January 6, 2022 January 6, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २३ गते शुक्रबारकाे राशिफल
पौष २३, २०७८, शुक्रवार 07 January, 2022 पञ्चमी, पौष शुक्लपक्ष, पोहेलाथ्व, ११४२ ने.सं. तिथि : पञ्चमी , १६:१२ बजे उप्रान्त षष्ठी, नक्षत्र : शतभिषा , ११:२७ बजे उप्रान्त पूर्वभाद्रपदा, योग : व्यतीपात , १८:२६ बजे उप्रान्त वरियान् करण : वालव १६:१२ बजेदेखि कौलव , २७:५४ बजे उप्रान्त वणिज मेष: यो शुक्रबार तपाईको व्यवहार अत्यन्त नम्र […]
एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट जादै प्रधानमन्त्री देउवा
January 6, 2022 N88LeaveaComment on एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट जादै प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संघीय संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि क्रियाशील हुने भएका छन् । लामो समयसम्म सदनमा देखिएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा क्रियाशील हुने भएका हुन् । यसका लागि देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको गठबन्धनकी नेतृ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी […]
January 6, 2022 N88LeaveaComment on एमालेले काठमाडौं अधिवेशनमा एक लाख कार्यकर्ता उतार्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको शुक्रबार हुने काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एक लाख जना सहभागी गराउने दावी गरेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एक लाख कार्यकर्ता सहभागी गराउने र त्यसको तयारी पूरा भएको जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राईले जानकारी दिए । यसअघि पुस २० गते काठमाडौंका ११ नगर, १३८ वडा र १० […]
एमालेलाई एक्लाएर चुनावमा सून्यमा झार्ने यस्तो छ ‘गठबन्धनको गाेप्य प्लान !
January 6, 2022 N88LeaveaComment on एमालेलाई एक्लाएर चुनावमा सून्यमा झार्ने यस्तो छ ‘गठबन्धनको गाेप्य प्लान !
काठमाडौं । नेकपा हुँदा सर्वशक्तिमान जस्तै रहेका केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नै छन् । तर, नेकपा फुटेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतियो । त्यसपछि एमाले पनि फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो । एमाले नफुट्दा सम्म पनि ओलीको शक्ति कम भएपनि यो हदमा कमजोर भएका थिएनन् […]
७ नम्बर गियरमा काम हाँकिरहेका पर्यटनमन्त्री आले संकटमा, देउवाले एक्सन लिँदै
January 6, 2022 N88LeaveaComment on ७ नम्बर गियरमा काम हाँकिरहेका पर्यटनमन्त्री आले संकटमा, देउवाले एक्सन लिँदै
काठमाडाैं । केही दिनयता नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रकरणले चर्चा पाएको छ । बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गत बिपिएस लिजिङ कम्पनीले महिनामा दुई लाख २१ हजार भाडा दिनेगरी २०७७ मा सम्झौता गरेको खुलेको छ । बतास समूहले नारायणहिटी मात्र नभएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षेत्रमा रहेको धर्मशालामा पनि होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ । धर्मशालालाई भाडामा लिएर उसले […]
चितवनका सीडीओ श्रीमतीका कारण तनावमा, जागिर धरापमा डुवायाे माछाले ….
January 6, 2022 N88LeaveaComment on चितवनका सीडीओ श्रीमतीका कारण तनावमा, जागिर धरापमा डुवायाे माछाले ….
काठमाडौँ । श्रीमान सफल हुनका लागि श्रीमतीको ठूलो हात रहेको हुन्छ । तर चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) अस्मान तामाङ श्रीमतीकै कारण तनावमा छन् । माछा खरिद गर्न जाँदा आफ्नै श्रीमती ‘ठगिएको’ भन्ने निहुँमा चितवनका सीडीओ तामाङले चितवनमा माछा बिक्री केन्द्र र कृषकको फार्ममा नै सिल गरेर आफ्नो जारिर धरापमा पारेका छन् । कृषकहरूले आफूहरूलाई […]
January 6, 2022 N88LeaveaComment on यी उपसचिवको २२ वर्षमा ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ वटा बैंकमा पैसा
काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा उपसचिव स्तरका एक कर्मचारी र उनकी पत्नीका नाममा ३२ स्थानमा घरजग्गा र १९ वटा बैंकमा रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी […]